Ukubuyekezwa kwe-Kassu Casino- iNingizimu Afrika
Ikhaya / Amakhasino / isibuykezo se-kassu casino
Isibuykezo se-Kassu Casino
Isofthiwe:NetEnt, Microgaming, Quickspin, NYX Gaming, Play n GO
Usizo: 24/7 customer support through email, 24/7 Live Chat, Complaints Section, Live chat
Ibhonasi Lokukwamukela:R22,500 Ibhonasi Lokukwamukela
300 Izikhathi Zokudlala Mahhala
IGenesis Global Limited, inhlanganisela ehlonishwayo embonini ye-Gaming, ibophe elinye ifindo ochungechungeni lwayo lwamakhasino aku-inthanethi e-2019, ngokwethulwa kweKassu Casino. Ilayisensiwe yi-Malta Gaming Authority (MGA) ne-United Kingdom Gambling Commission (UKGC), iKassu Casino iyikhasino yensiza egcwele enikela ngomtapo wolwazi omkhulu wemidlalo kuyo yonke imikhakha yekhasino. Lokhu kufaka phakathi ama-classic nama-video slots, ama-progressives acebile, imidlalo yamakhadi, i-roulette, i-video poker, ne-casino ebukhoma.
Abahlinzeki begeyimu e-Kassu Casino bahlanganisa izitudiyo ezivelele kakhulu emhlabeni, eziholwa yi-Microgaming, Evolution, NetEnt, Big Time Gaming, Play ‘n Go, ne-SoftBet. Ikhasino lamukela amalungu amasha ngephakethe lebhonasi elihle ngemuva kwalokho, inqwaba yezinyuso ezikhangayo zilindele ama-‘Kassette ‘amasha, njengoba opharetha bethanda ukuwabiza. Ekupheleni okwedlulele kwe-spectrum yokuphromotha iklabhu ye-VIP elite, lapho amaKassette aqotho abekwa khona esisekelweni.
Enye yezincazelo nokuchazwa kukaKassu ‘yisibonelo esihle sowesilisa waseFinland’. Cishe yile mascot, ebusa zonke izikhangiso kuphaneli enkabeni yenkundla yokudlala. Ama-esthetics abukeka ebaluleke kakhulu ngenkathi kwenziwa i-webhusayithi, yize izidingo zokuhleleka nokuzulazula kubhekwane nazo ngokwanele. Futhi sihlala sithanda amakhasino aku-intanethi azihluphayo ngokwethula, futhi akhulume ngawo, ngokwawo.
Kuyaqinisa futhi ukubona ukuthi i-Kassu Casino ihlangene nezinhlangano eziningi ezisiza ngokulutha kwezokugembula futhi isobala ngokwanele ukufaka izixhumanisi kuzo zombili amalayisense ayo. Okunye okuqinisa ukuzethemba iqiniso lokuthi yonke imidlalo esemtatsheni wezincwadi inamalayisense futhi ihlolwa njalo ukuthola imiphumela engahleliwe yenombolo futhi iqinisekiswe ngabacwaningi mabhuku abazimele. Okunye ukukhathazeka okubalulekile ukuvikelwa kobumfihlo belungu nemininingwane ebucayi, enakekelwa yizicishamlilo ezibethelwe ezijwayelekile ze-SSL ezifakwe emininingwaneni yezokuphepha.
IKassu Casino futhi inethimba lokweseka amakhasimende eliphendulayo, elilindile ukuphendula imibuzo yelungu kanye nokubhekana nezinkinga ezibucayi. Le ndawo ikhasino yangempela yaseYurophu enezifiso zomhlaba jikelele. Ububanzi bezimali obamukelayo nenombolo yezinketho zokukhokha nge-e ezitholakalayo, zikwenza kucace ukuthi lesi sikhungo singumphakathi womhlaba wonke wama-‘Kassettes ‘, abelana ngokuthanda okufanayo kwemidlalo esezingeni eliphakeme eku-inthanethi ngaphakathi kwendawo ephephile nenokulingana.
IKassu Casino South Africa
Abathanda iGaming baseNingizimu Afrika bathwale kanzima ukuthola izindawo ezinesizotha zokudlala online njengoba imithetho yaseNingizimu Afrika ingavumeli amakhasino aku-inthanethi angaphansi kwegunya lawo. Noma uhulumeni engakwazi ukuvimbela abantu bakubo ukuthi badlale ezindaweni zaphesheya kwezilwandle online, kube nzima kubadlali baseNingizimu Afrika ukuthola amakhasino aku-inthanethi abhekelela kubo ngokutholakala kokwamukelwa kwemali nekhwalithi yemidlalo, nezinketho zokukhokha, njll.
Konke okuguqukile eminyakeni embalwa edlule ngokukhula okungaguquki komkhakha wemidlalo ebonakalayo. Amakhasino aku-inthanethi aya ngokuya akhomba abadlali abavela eNingizimu Afrika ngezinsizakalo ezenzelwe iRainbow Nation. IKassu Casino ingesinye sezikhungo ezinjengalezi, ezibandakanya izintshisekelo zabadlali baseNingizimu Afrika. Ayigcini ngokwamukela nokukhokha eRand, abadlali baseNingizimu Afrika banezinkundla zabo zokudlala.
Uhlobo lweNingizimu Afrika lwewebhusayithi yakwaKassu Casino lufaka wonke amanani ebhonasi eRandi, okwenza kube lula ukuthi abadlali bahlole, ngaphandle kokuqhathanisa izimali. IKassu Casino iphinde inikeze izinketho eziningi zokukhokha, eziningi zazo ezisebenzela iNingizimu Afrika kanye nezifunda ezizungezile. IKassu Casino iphinde yahlangana nenhlanganisela yabathuthukisi, imidlalo yabo enelayisense yokunikezwa ezweni. IKassu Casino iyindlela efanelekile yabadlali ngenxa yezivumelwano zayo ezilungile, ezibhekelekayo neziphephile zokudlala.
Amakhodi Webhonasi Lokwamukela e-Kassu Casino
Uhlawulisa isampula yesilisa yaseFinland futhi umlingani wakhe wamukela abadlali abasha baseNingizimu Afrika ngephakethe lebhonasi elizodlalwa ngaphezu kwemali yokuqala engu-4. Ibhonasi isiyonke ingu-R22,500, ephelezelwa ngama-spins amahhala angadluli ku-300 azodlalwa kuzindawo ezithandwayo ezifana ne-Starburst, iGonzo’s Quest, i-Aloha! ICluster Iyakhokha, noma iRed Riding Hood.
Elinye iphakethe lokwamukela le-100% ibhonasi yomdlalo yenzelwe kuphela imidlalo yekhasino ebukhoma. Ibhonasi ephezulu ingu-R1,500. Ibhonasi eyamukelekile isebenza kuphela kwi-roulette ebukhoma, i-blackjack ebukhoma, ne-Dream Catcher.
Ibhonasi Yediphozithi Yokuqala
Idiphozi yokuqala ifaka ibhonasi efanayo engu-100% efinyelela ku-R4,500. Uma, uqala ngokufaka idiphozi ka-R4,500, uno-R9,000 osebenzayo ukuqala uhambo lwakho lokudlala e-Kassu Casino.U-30 we-300 yama spins wamahhala azofakwa ngokushesha ku-akhawunti yakho lapho kufakwa idiphozi yokuqala. Okusele kuzofakwa esilinganisweni esingu-30 ngosuku ezinsukwini eziyisishiyagalolunye ezilandelayo, ezizodlalwa emidlalweni ekhethwe ngaphambilini.
Ibhonasi yediphozi yesibili, yesithathu neyesine
Kuwo wonke amaphakethe okwamukela, amabhonasi aphezulu akhuphukela ku-R6, 000. Kwidiphozi yesibili, uthola ibhonasi yokufanisa engu-50% efinyelela kuleyo mali. Okwesithathu kuya kwelesine kufakwa imali, amabhonasi omdlalo ehlela ku-25% kodwa inani eliphakeme lihlala ku-R6,000.
Ayikho ikhodi yebhonasi yediphozi yokuqala, kepha amabhonasi womdlalo wesibili, wesithathu, nowesi-4 angafunwa nge-KASSU2, KASSU3, ne-KASSU4 ngokulandelana. Nazi ezinye izinto okufanele uzikhumbule lapho ufuna iphakethe lokwamukela:
Abadlali abasha bangafuna iphakethe lokwamukela jikelele noma ibhonasi yokwamukela yekhasino ebukhoma
Idiphozi encane yawo wonke amabhonasi ingu-R150
Inani eliphakeme umdlali angalikhipha kunoma yikuphi ukuwina kwamahhala ngama-R1,500
Iphakheji yokwamukelwa evumelekile isebenza kuphela kumadiphozithi akho okuqala amane
Amalungu amasha angakhetha ukuphuma kumabhonasi wamukelekile ngemuva kokwenza idiphozi
Abadlali badinga ukubheja wonke amabhonasi okwamukelwa amahlandla angu-40 ngaphambi kokuthi bakwazi ukukhipha ama-winnings abo
Imali efakwa ngeSkrill neNeteller ayifanele ukuthola ibhonasi eyamukelwayo
Ikhodi Yebhonasi Engekho e-Kassu Casino
I-Kassu Casino ayinikezeli ngebhonasi yokungafakwa kwalesi sikhathi.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile anikezwa e-Kassu Casino
Lapho abadlali abasha beqeda amabhonasi abo okwamukela, bangakwazi ukufinyelela kumaphromoshini amathathu aphezulu e-Kassu Casino afaka phakathi imiqhudelwano, ama-spins amahhala, amabhonasi ediphozi, nokuningi:
I-Kassu Casino ihlela imiqhudelwano ejwayelekile ezodlalwa kuzindawo ezikhethiwe ukuthola ithuba lokuwina imiklomelo emikhulu yemali. Lokhu kungaba nsuku zonke, masonto onke noma ngezimpelasonto. Kunemiqhudelwano yansuku zonke neyempelasonto lapho abadlali bathola khona amaphuzu ukuze bakhuphuke kubhodi yabaphambili lapho beya emiklomelweni yemali.
Imiqhudelwano yansuku zonke inemiklomelo yemali engu-EUR 5,000, kanti imiqhudelwano yangempelasonto ibiza ama-EUR 30,000. Njalo ukubheja okuphindaphindwayo kwe-Euro kukuzuzela iphuzu elilodwa. Eminye yemidlalo ekhethiwe yalo mqhudelwano yi-Arcane Gems, Artemis Vs Medusa, Golden Glyph, Big Bad Wolf, Sakura Fortune, Golden Glyph, Sticky Bandits, kanye ne-Sticky Bandits: Wild Return, Tiger’s Glory, Wild Chase.etc.
Ibhonasi yediphozi yangoLwesihlanu
I-Kassu Casino inika isonto lakho umvuthwandaba wokudlala onamabhonasi wemidlalo angama-25% aze afike ku-R750 njalo ngoLwesihlanu. Noma kunjalo, kunezimo ezithile. Kufanele ngabe wenze okungenani amadiphozithi ama-2 selokhu waba yiKassette. Kufanele futhi ukuthi ufake imali ebiza u-R750 ezinsukwini ezi-4 ezedlule. Uyalulekwa ukuthi uzijwayeze imigomo nemibandela yebhonasi.
Ama Spins Wamahhala Wango lwesibili
Ama-Kassette anganweba isasasa lawo lokudlala ngempelasonto ngoLwesibili olulandelayo. Wonke u-Kassette, owenza okungenani idiphozi eyodwa kusukela ngoLwesihlanu kuya ngoMsombuluko, uvumelekile ukuthola ama-spins wamahhala angu-20 ‘uma ufaka imali ngoLwesibili’. Ama-spins wamahhala azodlalwa emidlalweni ethandwayo yeNetEnt efana. Sicela uzijwayeze ngemigomo nemibandela yalesi sikhangiso, ikakhulukazi izidingo zokubheja nezingqinamba zako.
Yize iKassu Casino ine-VIP Club, asikwazanga ukuthola imininingwane eminingi mayelana neklabhu noma uhlelo lokuthembeka lwekhasino, okuvame ukuholela kwi-VIP Club yekhasino. Isigaba se-VIP sewebhusayithi yekhasino sithi i-VIP Club ingeye-Kassettes ekhokhelwa efanele izinzuzo ezilandelayo:
Ama phromishini akhethekile namabhonasi
Ukucutshungulwa okusheshayo kokuhoxiswa
Umphathi wekhasino womuntu siqu
Izikhathi zokuphendula okusheshayo ngenkonzo yamakhasimende
Izipho zokuzalwa ze-Bespoke
Amaphakheji weholide akhethekile
Izinhlelo zokukhipha ezenziwe ngezifiso
Ama-imeyili enziwe waba ngewakho
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi e-Kassu Casino
Ukubhalisa e-Kassu Casino kungumoya, futhi kungafezwa ngezinyathelo ezimbalwa ezilula njengokulandelayo:
Chofoza ku-‘Joyina uKassu ‘ngakwesokudla phezulu kuwebhusayithi
Khetha igama lomsebenzisi, iphasiwedi bese ufaka i-imeyili yakho kwifomu lokuqala bese uqhafaza u-‘Okulandelayo ‘
Kwifomu lesibili, uzocelwa ukuthi:
Faka igama lakho nezibongo
Khetha ubulili bakho nosuku lokuzalwa
Faka ikheli lakho, ikhodi leposi nedolobha (Izwe lakho belizokhethwa kuqala)
Khetha imali oyithandayo bese ufaka inombolo yakho yocingo
Thikha ibhokisi uma ungathanda ukuthola ukuxhumana kwezokumaketha
Ngokuchofoza ku-‘Bhalisa ‘, wamukela imigomo nemibandela, izinqubomgomo zobumfihlo nezamakhukhi nokuthi uneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala
Halala! Manje usungu-Kassette osemthethweni futhi konke sekuhleliwe ukuthi ufune iphakethe lakho lokwamukela noma ibhonasi yokwamukela yekhasino ebukhoma.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala e-Kassu Casino
Ikhwalithi namandla wamanani womtapo wolwazi wemidlalo yisici esikhanga kakhulu se-Kassu Casino. Lokhu kungenxa yabathuthukisi bemidlalo ababambe iqhaza, ehlanganisa ukhilimu womkhakha, futhi imidlalo yabo edume umhlaba wonke. Zibungazwa ngamatimu azo amahle, ubuciko bokuqhafaza, nezici ezisebenziseka kalula ngabadlali, futhi izihloko seziyizimpawu zazo ngokwazo. Imidlalo yasekhasino ebukhoma inokuheha okwayo.
I-Kassu Casino ineplatifomu elula yokudlala, efinyeleleka kusuka ngaphansi kwephaneli lesikhungo. Ngenhla nje kwayo, ungabona ukuthi amaKassette aphumelela kangakanani kumdlalo ngamunye. Eceleni kwayo kukhona i-jackpot ticker ekhombisa isamba sakho konke okuqhubekayo ekhasino. Umtapo wezincwadi wemidlalo uhlukaniswe waba yizindawo zokucela ezihlukene ezinjenge-slots & jackpots kanye nekhasino ebukhoma. Yonke imidlalo yetafula kanye ne-video poker ifakwe kwiklabhu yokwamukela izivakashi ‘ye-Casino Games’. Ama-Kassette angaphinda ahlunge imidlalo kusuka kubahlinzeki bemidlalo ethile. Iningi lemidlalo liyatholakala kumodi yedemo ngaphambi kokuba idlalwe ngemali yangempela.
Izikhala zakha ingxenye yengonyama yelabhulali yemidlalo yeKassu Casino, equkethe izindawo ezithandwa kakhulu zakudala nezamavidiyo emhlabeni. Ungathola izikhala zokwanelisa konke ukuthanda ngokuya ngamatimu, izici zomdlalo kanye nezinombolo zama-reels nama-payline, njll. Izihloko ezidumile zifaka iWolf Gold, iGold Digger: Hold and Win, Legacy of Dead, Big Buffalo, Vault of Fortune, kanye ne-Extra Chili Megaways, njll.
Imidlao Ye tafula
Yize ama-slots eyisigaba semidlalo esithandwa kakhulu, imidlalo yetafula yakha umgogodla wamakhasino, noma ngabe ayinto ebonakalayo noma engokomzimba. Abadlali banethemba lokuthi inhlanhla yabo ifana namakhono abo ekhadi nezinombolo zama-roulette. Yonke imidlalo yamakhadi nezindawo ze-roulette zingatholakala esigabeni samageyimu we Casino kulabhulali enkulu futhi kufaka phakathi izinhlobo eziningi ze-blackjack, i-baccarat, i-poker, nesihloko esisodwa sokubekezela. Uzothola namatafula athandwa kakhulu ‘esondo elincane’ afana neFrance, European, neAmerican Roulette.
Ama khasino abukhoma
Imidlalo yasekhasino ebukhoma ithole ukuthandwa okukhulu ngenxa yezinhlelo ezintsha zemidlalo, nobuchwepheshe obuthuthukile, ikakhulukazi ukusakazwa bukhoma okusheshayo. Amageyimu abukhoma ahlinzeka ngesipiliyoni sekhasino esiseduze esiyiqiniso ngama-croupiers abukhoma asebenza ngamakhadi wangempela odlala ngawo nabadlali bangempela, abakude. Ungalindela ukuthola izinhlobo eziningi ezibukhoma ze-blackjack, i-baccarat, i-poker ne-roulette. Eminye imidlalo ebukhoma kule ndawo ifaka i-Monopoly, Deal noma No Deal, iSic Bo, ne-Dragon Tiger, njll.
Njengoba kushiwo, ngemuva kwezikhala nemidlalo ebukhoma, zonke ezinye izigaba zifakwe esigabeni seMidlalo Yekhasino. Ama-Kassette kufanele afune emigqeni nasemigqeni yemidlalo ukuze afike ezindaweni zawo azifunayo, uma engazifunanga ngesihloko. Ngokuvamile okubizwa ngokukhethekile noma imidlalo esheshayo, lena yimidlalo yomphakathi ethandwa kakhulu efana nebhingo, amakhadi okuqala, ne-keno, njll. Lesi sigaba sineqoqo elincane lesihloko se-poker sevidiyo njengeJacks noma i-Better, neDeuces Wild, njll.
Ama Jackpots Aqhubekayo
I-Kassu Casino inendawo yokwamukela izivakashi enenqubekela phambili ecebile eyondliwe ngabadlali abavela kuwo wonke umhlaba. Iningi labahlinzeki bemidlalo yekhasino linamanethiwekhi amakhulu omhlaba wonke ezinqubekela phambili ezijwayele ukungena emakhulwini ezinkulungwane ngisho nasezigidini, ongazibona kuzo zonke izinqubekela phambili endaweni yokwamukela izivakashi yekhasino. Iziqu zifaka iMega Moolah, Major Millions, Hall of Gods, Divine Fortune, Caribbean Stud Poker, Downtown Abbey, The Magnificent Seven, Gunslinger Reloaded, Treasure Nile, Dragon Chase, Imperial Riches, and Mercy of the Gods, nokunye okuningi.
Ingabe i-Kassu Casino Iyatholakala nakwiSelula?
Kakhulu! I-Kassu Casino ingatholakala kuwo wonke ama-smartphone namadivayisi wethebhulethi asebenza ku-Android, Windows Phone, naku-Blackberry. Iningi lemidlalo ekhasino liphatha ukubhala ikhodi kwe-HTML5, esekela zonke izinhlelo zokusebenza kwamaselula futhi ihlele kabusha ngokuzenzakalela ipulatifomu yokudlala kusikrini esincane, ikwenza ukwazi ukujabulela imidlalo ngokucacile kokubonakalayo komsindo. Njengoba i-Kassu Casino itholakala online kuphela, usadinga okulandelayo:
I-smartphone yakho kufanele ibe nesiphequluli samanje esifana ne-Chrome noma iMicrosoft Edge. Abasebenzisi bethebhulethi kumele babe neSafari.
Ukuzinza kwe-inthanethi okuzinzile ngaso sonke isikhathi. Ijubane kufanele lihlonipheke; I-Wi-Fi noma ukuxhumeka kwe-4G kuza kunconywe kakhulu ngokugembula okungenamthungo.
Kungcono ukuthi ube nedivayisi entsha, ekwazi ukukunikeza ukuphepha ngezikhathi ezithile nezinye izibuyekezo.
Uma ususethiwe, vele uthayiphe i-URL yeKassu Casino kusiphequluli sakho seselula bese ulayisha ipulatifomu yokudlala. Ikhasino elihamba phambili yinguqulo encane yekhasino ye-PC, ngaphandle kwezinguquko ezimbalwa zokwamukela ifomethi encane. Izinkinobho zokungena nokubhalisa zihanjiswe ezansi kwesikrini.
Enye ilabhulali yomdlalo, edinga ukuskrolwa ngokuvundlile ukufinyelela kuwo wonke ama-lobbies. Ungabuka kalula zonke izici ezingezona zokudlala zewebhusayithi kufaka phakathi ukubhenka, ukukhushulwa, nokuhlinzekwa kwamakhasimende, njll. Kungaba nemikhawulo emincane enanini lemidlalo ongayidlala kuselula yakho, ngoba eminye imidlalo yakudala kungenzeka ingabi nezinhlelo ze-HTML5 . Kepha ungaqiniseka ukuthi ungadlala zonke izinto ezithandwayo ezigabeni zekhasino njenge:
Green Diamond Blackjack live
3 Hand Casino Hold ‘Em
Ngingayi dawuniloda i-Kassu Casino Kuselula Yami?
Amakhasino wanamuhla awasanikezeli ngezinguqulo ezingalandwa, ezingaxhunyiwe ku-inthanethi, zamapulatifomu abo wokudlala. IKassu Casino iyaxhumana nezikhathi, futhi iyazi ukuthi abadlali bakhetha ukwenza imidlalo yabo ngesikhathi sangempela, futhi abanasikhathi sokulanda, abathatha izindawo zokugcina eziyigugu futhi banciphise izinto.
Izindlela Zokuhoxa Ezamukelwa e-Kassu Casino
Bank/Wire Transfer Yebo Izinsuku ezi-4 kuya kwezi-7
Visa Yebo Izinsuku ezi-2 kuya kwezi-4
MasterCard Yebo Izinsuku ezi-2 kuya kwezi-4
Skrill Yebo Amahora angu-24
Neteller Yebo Amahora angu-24
EcoPayz Yebo Amahora angu-24
PayPal Yebo 2-3 days
Jeton Yebo Amahora angu-24
Easy EFT Yebo Izinsuku ezingu-1-2
Izindlela Zoku Diphozitha Ezamukelwe e-Kassu Casino
Paysafe Card Yebo
Interac Online Yebo
Kusungulwe: 2019 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Isetshenziswa ngu: Genesis Global Limited I-imeyili: [email protected]
Ilayisensi: I-Malta Gaming Authority, i-UKGC Ingxoxo Esheshayo: NA
Inguqulo Yokulanda: Cha 24/7 356 ukwesekwa: Cha
Inguqulo Engalandiwe: Yebo Website: https://www.kassu.com/
Izinzuzo nezingozi ze-Kassu Casino
I-1,300 kanye nemidlalo ehamba phambili emhlabeni
Ilabhulali inikwe amandla abahlinzeki besoftware abaphezulu be-iGaming
Ukhomba abadlali baseNingizimu Afrika
Inewebhusayithi yaseNingizimu Afrika
Yamukela futhi ikhokhe e-SA Rand
Ikhasino enhle kakhulu yeselula
Iqoqo elikhulu lemidlalo yekhasino ebukhoma
Indawo enkulu yokwamukela izivakashi yama-jackpots acebile aqhubekayo
Ambalwa amabhonasi avamile
Zimbalwa izihloko ze-poker video
Yini Eyenza i-Kassu Casino Ukhethe Oluthandwa Ngabadlali BaseNingizimu Afrika?
I-Kassu Casino iyisikhungo sesimanje, esigcwele sesevisi iGaming esihlinzeka abadlali abavela kuwo wonke umhlaba, ngaphandle kwamazwe anemikhawulo. Ikhasino lamazwe omhlaba langempela, le ndawo ihlose kakhulu abadlali baseNingizimu Afrika abahlinzeka ngezinto ezahlukahlukene ezifanele amaBhokobhoko. IKassu Casino isiphenduke intandokazi kubantu baseNingizimu Afrika ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo:
Umtapo wolwazi wemidlalo uheha abadlali baseNingizimu Afrika
Imidlalo iyatholakala eNingizimu Afrika
Uhlobo lwewebhusayithi yaseNingizimu Afrika
Ama phromoshini kanye namabhonasi eSouth Rand
I-Kassu Casino yamukela futhi ikhokha kuma-SA Rands
Inikezela ngezindlela ezahlukahlukene zokukhokha ezilungele i-SA
Izakhalazo e-Kassu yase Ningizimu Afrika.
Asibonanga sikhalazo esibi nge-Kassu Casino, futhi asikho esivela kubantu baseNingizimu Afrika. Awulindelanga ukubona izikhalazo ezinkulu ngamalungu mayelana namakhasino aku-inthanethi anikezwe ilayisense yiMalta Gaming ne-UKGC noma lawo malayisense angahlali isikhathi eside. Kodwa-ke, izimo zingashintsha, futhi noma nini lapho sithola izingqinamba ezibucayi ngalesi sikhungo, ungaqiniseka ukuthi sizogcina abafundi bengena kulwazi.
Ngabe i-Kassu Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Awekho amakhasino aku-inthanethi ajabulela ukuba semthethweni eNingizimu Afrika, ngoba iRainbow Nation ivimbele zonke izikhungo ze-iGaming. Yize izwe linegunya lokuthathela izinyathelo amakhasino angekho emthethweni ngaphakathi kwemingcele yalo, uhulumeni akanawo amandla okuphatha amakhasino aphesheya kwezilwandle. Akukho okuningi iziphathimandla ezingakwenza ukuvimbela abantu baseNingizimu Afrika ukuthi badlale kumakhasino aphesheya kwezilwandle.
Ngikhipha Kanjani Imali Ku-Kassu Casino?
Ngaphambi kokwenza isicelo sokuhoxa, udinga ukuqinisekisa ukuthi unebhalansi etholakalayo yokukhipha futhi awunawo amabhonasi asebenzayo noma izidingo ezingagcwaliswanga zokudlala. Ungacelwa futhi ukuthi uqedele okusemthethweni kwe-KYC ngaphambi kokuhoxa kwakho kokuqala. Uma konke kuhamba kahle, inqubo yokuhoxa ilula kakhulu:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho yekhasino bese uqhafaza ku-‘Ukuhoxiswa kwemali ‘ngakwesokudla phezulu.
Khetha indlela yakho yokukhokha oyithandayo
Faka inani ofuna ukulikhipha
Yini i-Kassu Casino?
I-Kassu Casino iyikhasino ebonakalayo esebenza ngokugcwele enemidlalo esezingeni eliphakeme evela kubahlinzeki besoftware ephezulu. IKassu Casino inikeza imidlalo kuzo zonke izigaba ze-khasino ezinjenge-slots, ama-progressive, imidlalo yamakhadi, i-roulette, i-video poker, imidlalo yekhasino ebukhoma, nemidlalo engajwayelekile. IKassu Casino inikwe ilayisense yiMalta Gaming ne-UKGC futhi inazo zonke izinqubo ezilungile, ezibhekelekayo neziphephile zokudlala.
Ngubani ophethe i-Kassu Casino?
I-Kassu Casino iphethwe futhi isebenza yiGenesis Global Limited, okuyinhlangano ehlonishwayo, esebenza ngentambo yamakhasino aku-inthanethi akhokhelwayo. IGenesis Global Limited ibhaliswe eMalta kuleli kheli elilandelayo: 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta ’XBlex, XBX 1301, Malta.
Ingabe i-Kassu Casino Inezici Zokubheja Ezemidlalo?
Cha i-Kassu Casino ayinayo incwadi yezemidlalo okwamanje. Ikhasino alinikezi ngisho nemidlalo ebonakalayo, futhi linikezelwe emidlalweni ye-casino online.
Iphephe Kangakanani i-Kassu Casino?
I-Kassu Casino inikeza indawo yokudlala ephephile ngokwedlulele, elinganayo nenesibopho nalezi zici ezilandelayo:
Yikhasino elisemthethweni eligunyazwe ngabakwaMalta Gaming ne-UKGC
Opharetha, uGenesise Global Limited wuhlobo lomkhiqizo oludumile lwe-iGaming futhi usebenzisa amakhasino amaningi aku-inthanethi akhokhelwayo ama-premium
Ikhasino inikela ngemidlalo kuphela, eqinisekiswe ngemiphumela ye-RNG ngabahloli abazimele
Le webhusayithi inewebhusayithi ephephe kakhulu enikwa amandla yiNet Entertainment, esebenza ngaphansi kwelayisense yayo i-Malta
Imininingwane yomuntu siqu neyasebhange yamalungu ivikelwe ngemuva kwezingilazi ezibethelwe ze-SSL
Ikhasino linikezela ngezinsizakalo ze-e-payment ezaziwayo nezethembekile